Amafutha we-apricot kernel (amafutha e-apricot) - isicelo sezinwele, ubuso, eyelashes, izipikili
Amafutha we-apricot kernel - isici esibaluleke kakhulu sezimonyo zasekhaya
Ukukhipha amafutha kuma-apricot kernels aqala isikhathi eside-eminyakeni engaba ngu-5000 edlule. Ngokomthombo othile, izwe lakubo yiChina, ngakolunye uhlangothi - iGrisi kanye ne-Italy. Ngisho nalapho, izindawo zayo eziwusizo zatholwa. Thola lo mkhiqizo obalulekile ngokucindezela okubandayo. Futhi libhekisela kumafutha esisekelo.
I-Apricot Bone Oil - Properties
Kunombono wokuthi amafutha angenasidingo ayasiza kakhulu, ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini ne-linoleic acid. Kodwa kanye nalokhu, kungabangela ukwelashwa, kaningi - kubasebenzisi abancinci kakhulu. Ngendlela, ungasebenzisa lo mkhiqizo wengane yengane. Lapha, amafutha we-apricot kernel angcono kunokucwengiswa. I-allergenic encane kakhulu.
Izinzuzo ukuthi i-apricot kernel amafutha angayiletha azikwazi ukugxila kakhulu. Ngezindleko eziphansi kunesitolo sokugcina samavithamini, amaminerali kanye nama-antioxidants, ngakho-ke le remedy iyadingeka ku-cosmetology.
Amafutha we-apricot ngamatshe amaningi anamavithamini A, C, F, kanye nama-trace elements (potassium ne-magnesium). Iqukethe i-poly- ne-monounsaturated fatty acids:
Amafutha we-apricot kernel - isicelo
Ngakho yikuphi ukusetshenziswa kwamafutha we-apricot kernel ku-cosmetology? Njengoba unikezwe zonke izici zayo, kuyinto nje ithuluzi elibalulekile. Apheze neze aphunga, aqondwa kahle ngezinhlobo ezahlukene zesikhumba, elwa nohlu lonke lwezinkinga. Ingasetshenziswa ngokwehlukana futhi ihlanganiswe namanye amafutha. Amafutha anjalo ngumsizi omuhle kakhulu wokusilisa kanye nezinye izinqubo zezempilo. Leli khambi liyakuthisa ukushisa, ukusikeka nokwehla. Yanezelwa ngisho nasezindlini zokwelapha futhi ichitha imithi.
Amafutha we-apricot imbewu
Amafutha we-apricot ama-apricot angenakuphulukiswa ebusweni. Ukusebenza kwayo kunomphumela omuhle kuzo zonke izinhlobo zesikhumba. Ithoni futhi iphilisa, ivuselela futhi iqinise, ibuyisela ukulinganisela kwesikhumba senkinga. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi uyisebenzise esikhundleni se-lotion yokuhlanza, noma esikhundleni sekhilimu ebusuku. Isikhumba esicabangelayo sizosusa ukuvuvukala futhi sizokubonga ngokubukeka kwayo okukhulu. Udinga nje ukusula ubuso bakho nge-napkin ehlanjululwe.
Amafutha we-apricot imbewu yokufaka isithombe
Ilanga ngokwayo linomphumela omuhle emzimbeni, kodwa kuphela ngesilinganiso esincane futhi ngesikhathi esifanele. Ivuselela ukukhiqizwa kwe-vitamin D, ngenxa yokuthi, ngaphandle kokuphazanyiswa, ukusebenza komzimba, isikhumba namathambo kuqinisa. Kodwa uma ukuchayeka emisebeni ye-ultraviolet kukhulu ngokweqile, kuvele isithombe esithombeni. Njengomthetho, kungakapheli isikhathi futhi awujabulisi umuntu osemusha othanda ukuthatha izibhuku zelanga. Amafutha we-apricot e-cosmetics asiza ekunciphiseni kakhulu ukulimala emisebeni ye-UV, inikeza isithombe esihle kakhulu sokuguga ukuguga, kanye nomphumela wokushisa.
Amafutha we-apricot imbewu yesikhumba eseduze kwamehlo
Uma ukhathazekile ngenkinga yemibimbi encane ephakathi kwamehlo, okuthiwa i-goose paws, noma uphupha ngokukhohlwa ukuvuvukala phansi kwamehlo, khona-ke lena yikhambi elihle kakhulu. Ungawabeka kalula emahlombe akho, futhi emva kwamaminithi angu-30, susa izinsalela ze-napkin. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ama-masks asekhaya ayenziwe ekwakheni. I-spoon ye-bhotela ne-banana mash ezingxenyeni ezilinganayo kuyoba umxhwele ngemiphumela elula. Kungenzeka ukuxuba umkhiqizo we-base namanye amafutha afanelekayo, emva kwalokho kufanele futhi asetshenziswe kumajwabu amehlo. Amafutha ama-apricot kernels azungeze amehlo akwazi ukuncintisana ngomphumela walo wokuvuselela ngisho nama-creams abizayo.
I-Apricot Eyelash Oil
Kusukela ezigabeni zangaphambilini kucacile ukuthi yimuphi umphumela wamagic we-apricot kernel. Uhlelo lokusebenza ku-cosmetology luye lwasakazeka. Ukuqeda imibimbi, ukuphulukisa, ukuphuthumisa akuyona yonke uhlu lokufaneleka. Ingabe i-eyelashes yakho iba yincane futhi ibuhlungu? Ingabe badinga ukubuyiswa ngemuva kokwakha? Khona-ke lo mkhiqizo oyisimangaliso uzosiza ukulungisa isimo. Ukusebenzisa amaconsi ambalwa nge-cotton-wool disc egijimele emanzini, angakwazi ukubuyisela umkhiqizo wokukhishwa kwamasonto kusihlwa.
Uma ufaka kuwo umculi, i-burdock namafutha e-alimondi, bese uwashaya amashiya akho kanye ne-eyelashes, bese kuthi emva kwesikhathi esithile, uma usetshenziselwa njalo kuzoba mkhulu kakhulu, kuphelile futhi kuhle kakhulu. Kubalulekile ukucabangela umthetho owodwa: akunconywa ukuba ushiye amafutha embewu ye-apricot eyelashes isikhathi eside, ihora elilodwa lanele. Khona-ke kufanele kususwe ukuze kungabangela ukukhukhumeza kwejwabu leso.
Amafutha we-apricot amafutha
Umthelela omuhle unamafutha we-apricot nezinwele. Uma isetshenziselwa njalo, izinwele zizothola ukubukeka okunempilo nokuqhakazile, zilalele, zithobe, zibushelele, iziphetho zokuhlukaniswa zizobuyiselwa. Kungasetshenziswa nje kuphela okwesikhashana, futhi kuhlanganise nemikhiqizo oyikhonzile: ama-shampoos, izimo zokugqoka, ama-balms namaski. Faka amafutha ebalulekile ama-apricot kernels ngendlela efanele: izinwele ezomile - usebenzise lonke ubude, ngamafutha - kuphela kumacebiso.
Amafutha we-apricot kernel ngezipikili
Isenzo semiphumela emihle emapulangwe e-nails kanye ne-cuticle iyigugu. Iqeda ukushicilela kwamanothi, kunciphisa umthelela wokukhanya kwe-ultraviolet, ukukhathalela ngokuphelele isikhumba sezandla. I-apricot yamafutha e-Cosmetic ayikwazi nje ukunciphisa i-cuticle ngesikhathi sokugcoba umzimba, kodwa futhi ukuqinisa ipuleti yama-nails, ukuyilungisa ngamafutha acids kanye neyinkimbinkimbi yamavithamini. Ukuze uthuthukise isimo sezipikili imizuzu engu-15, gcina izandla zakho zifudumele ngamafutha we-apricot.
Amaski anamafutha we-apricot kernel
Izakhi ze-Vitamin zalomkhiqizo obaluleke kakhulu ku-cosmetology zisinika ubuhle nokuhlanza, okufana nezithelo ze-apricot. Kukholelwa ukuthi ithuluzi liyigugu kakhulu ekusetshenzisweni okuncane. Lokhu kusho ukuthi amafutha angagcwalisiwe ama-apricot kernels anika umphumela omkhulu kunomlingani ohlanjululwe. Ukusetshenziselwa ngaso sonke isikhathi emasikini omzimba ushaya ngekhono layo eliyisimangaliso. Uma ufuna ukubukeka ekhangayo futhi ehlotshiswe kahle, awukwazi ukwenza ngaphandle kwethuluzi elinjalo ku-arsenal yakho.
Mask for izinwele nge apricot kernel amafutha
Amafutha we-apricot ezinwele ziyisikhathi esihle sokuphucula nokubuyisela ikhambi. Izinkinga eziningi zizoshiya ngaphandle kokulandelela, futhi izinwele zizokubonga ngobuhle bazo. Ngaphambi kokusebenzisa, amafutha kufanele athiswe kancane, isibonelo, ngokubeka amabhodlela ngamanzi ashisayo. Ukuze ugweme imiphumela emibi yokukhanya kwe-ultraviolet, ngaphambi kokuya ekhanyeni, vele usebenzise ukudonsa kuze kube semikhawulweni yama-curls. Uma kudingekile ukubuyisela izinwele ezimele , khona-ke kuzodingeka wenze imaski yezinwele kulolu hlelo. Isibonelo, ngaphambi kokugeza izinwele zakho ekukhiyeni kwakho, faka amafutha uhhafu wehora noma ihora.
Umshini wokuvuselela izinwele
i-isikhupha samaqanda - izingcezu ezingu-3;
imayonnaise - 2 tsp;
Amafutha we-apricot - 30 ml;
ukuvutha okubomvu we- pepper - i-pinch engu-1.
Hlanganisa ngokuphelele izingxenye ze-mask futhi usakaze emakhakheni.
Kunconywa ukugqoka i-capello ye-cellophane.
Ngemva kwemizuzu engu-30, geza ikhanda ngendlela evamile.
Phinda izikhathi eziningana ngezinsuku eziyisikhombisa okungenani inyanga.
Amaski anamafutha e-apricot ebusweni
Amaski anamafutha ase-apricot anomphumela onenzuzo ongapheli ebusweni. Isikhumba soma siphuthumisa, sinamafutha futhi sinengqondo ekuholeni ebhalweni oludingekile, sondla futhi siphumelele, siphulukise.
Mask for isikhumba esomile
iqanda leqanda - ucezu olulodwa;
Amafutha ase-Apricot - 15 ml.
Hlanganisa ukudla okuphekwe futhi usakaze ingxube ebusweni.
Ngemuva kwemizuzu engu-15 ungasula futhi ujabulele umphumela.
Amafutha ase-Apricot - amaconsi angu-12;
I-Ascorutin (i-vitamin C + rutozid) - ithebhulethi elilodwa;
buckyag - 12 g;
Strawberry - amajikijolo ama-6 aphakathi.
Amajikijolo ama-strawberry, i-asco-rutin tablet kanye ne-powder scrap.
Engeza i-oyili base bese uxuba.
Ukugcoba kusengaphambili isikhumba sihlanjululwe yi-scrub, ukugeza ngemuva kwemizuzu engu-20.
Mask Ukuguga Okuguga
isikhuphaphu - ucezu 1;
uju - 1 ithisipuni;
Amafutha we-apricot kernel - 15 ml.
Okokuqala, pheka i-mango ebisi, bese uyipholisa ukuze ungabi ushisayo, kepha ufudumele.
I-Yolk no-honey whisk. Engeza le ngxube nebhotela ku-cereal.
I-mask kufanele igcinwe ebusweni ngokungabi ngaphezu kwengxenye yehora, ngemuva kwalokho nje ukuyigeza.
i-apricot kernel amafutha -5ml;
amafutha lemon - amaconsi amabili.
Izithako kufanele zixutshwe futhi zisetshenziswe kwisisekelo somzimba we-napkin.
Faka isicelo ebusweni imizuzu engu-20.
Ukuhlanza Ukucubungula Mask-Sula
ibhotela le-apricot - 1 tbsp;
Ukukhula okuvela ku-oat flakes - 14 g.
Hlanganisa konke okudingayo futhi usakaze ebusweni bakho.
Ngemuva kwekota yesigamu, gcoba ubuso bakho ngokunyakaza okuyindilinga, ngokucindezela kancane.
Ukunqunywa izinwele ezimfushane kobuso besifuba
Ama-braiding braids - izinwele zezinwele
Indlela yokwenza izinwele ziqonde ngqo?
Izindebe ezinhle zezinwele ezimfushane
Amafutha wezinwele ezimile
Izitayela zezinsuku zanamuhla
Ukunakekela izinwele ezikhazimulayo
Ukushisa kwe-Thermal Guajo
Ukuhlukaniswa ngoKhisimusi ngoKhisimusi ngekusasa
Isaladi "Ulwandle Oluphansi"
Helenium - ukufika nokunakekelwa emhlabathini ovulekile
Kungani sesame ewusizo?
Ungasusa kanjani i-goosebumps?
I-Convection ku-microwave - iyini?
Ubuntu buni - ingqondo yebuntu nayo yonke into ehlobene nayo
Ungamisa kanjani i-hiccup?
I-Jeans 7/8 - ukuthi yini ongayigqoka nokuthi ungakha kanjani izithombe ezenziwe ngezithombe?
I-Feng Shui Kitchen - Imithetho
Umgexo kusuka kubumba lobumba
Isitayela sezamabhizinisi samantombazane 2016
Izindawo zokuhlala zaseCyprus
Izinkumbi zengulube - iresiphi
Indlela yokwenza uphahla lwezinwele?